Wariye ka tirsanaa TV-ga Jubbaland oo Muqdisho ku geeriyooday - Caasimada Online
Home Warar Wariye ka tirsanaa TV-ga Jubbaland oo Muqdisho ku geeriyooday
Wariye ka tirsanaa TV-ga Jubbaland oo Muqdisho ku geeriyooday
Muqdisho (Caasimadda Online) – C/laahi Cismaan Macalin oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qarixii dhowaan ka dhacay magaladda Baladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan ayaa saakay ku dhintay isbitaalka Madiino ee magaaladda Muqdisho.
Ninkaan oo wariye ahaa ayaa waxaa gaaray dhaawac madaxa ah waxaana dhowr isbitaal oo ku yaala Muqdisho ay sheegeen inaan xaaladiisa dalka waxba looga qaban karin mana jirin cid kale oo u istaagtay iney dibadda kula soo tacaasho.
Ugu dambeyn saakay ayuu ku ekaa waqtiga uu C/laahi kulahaa aduunka ,waxaa uu ka tirsanaa saxafiyiinta magaaladda Baladweyne ee gobalka Hiiraan, sidoo kale waxaa uu halkaas wakiil uga ahaa TV-ga maamulka Jubbaland.
Wariyahaan ayaa ifka uga tagay xaas iyo hal cunug.
Maxaa ka taqaanaa Taliyaha cusub ee loo magacaabay Nabadsugida?
President Donald Trump railed against the investigations into Russian interference in the 2016 election Saturday night into Sunday, sending off a stream of tweets...